Shiinaha T-shirt Compostable T-shaati-saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Boorsooyinka Lead
Bacda funaanad-bacriminta ah
Bacda funaanad lagu bacrimin karo ayaan caag ahayn！
Hadday tahay bacda funaanad lagu bacrimin karo ama alaabta ceyriinka ah, waxaan ka gudubnay baaritaanka iyo caddeynta EN13432. Adoo adeegsanaya bacaha wax lagu gado ee alaabada aan deegaanka u wanaagsaneyn waxaad ku tuseysaa adduunka dibadiisa iyo macaamiishaada inaad leedahay muuqaal cagaaran oo aad taageereyso horumar waara.
Haddii ay dhacdo inaad u baahato boorsooyin funaanad lagu bacrimin karo oo leh naqshad iyo astaamo kuu gaar ah, Leadpacks ayaa kaa caawin kara. Waxaan ku siinaa bacaha cabbirro kala duwan, qaabab iyo dhumuc si ay ugu habboonaadaan baahiyaha oo dhan. Waxaan ku dari karnaa astaamo, sawirro ama fariimo kale oo ku wajahan astaan ​​muuqaal. Boorsooyinka funaanad lagu bacrimin karo ayaa lagu daabacay illaa 8 midab oo labada dhinac ah.
Nolosha Shaashadda Compostable Bag Shelf Life waa 10-12 bilood.
Magaca Shayga Bacda funaanad-bacriminta ah
Waxyaabaha PLA / PBAT, Kalsooni galleyda
Cabbir / dhumuc Caado
Codsiga Dukaameysi / Dhiirrigelin / Boutiik / Raashin / Qaadasho / Dukaan, iwm
Muuqaalka Biodegradable iyo Compostable, Duty culus, Eco-saaxiibtinimo iyo Daabacaad Dhameystiran
Lacag bixinta 30% dhigaal ah T / T, inta soo hartay 70% ayaa laga bixiyay biilka naqshadaynta
Xakamaynta Tayada Qalabka Sare iyo Kooxda QC ee Khibradda leh ayaa hubin doona alaabada, alaabooyinka dhammeeyey iyo kuwa dhammaaday si adag tallaabo kasta ka hor inta aan la rarin
Shahaadada EN13432, ISO-9001, shahaadada D2W, warbixinta Imtixaanka SGS iwm
Waqtiga dirida Geeyey 20-25 maalmood kadib bixinta
Waxaan markhaati ka nahay xiisaha sii kordhaya ee yareynta isticmaalka caagagga dhaqameed, labadaba macaamiisha iyo, gaar ahaan, siyaasiyiinta sidoo kale. Dhowr waddan ayaa horey u soo saaray mamnuucida guud ee bacaha balaastigga ee tafaariiqda. Isbeddelkani wuxuu ku sii fidayaa adduunka oo dhan.
Boorsooyinka Leadpacks-ka ee ku jira 100% waxyaalaha la baabi'in karo iyo kuwa la kariyo ayaa wax ka tari kara astaanta cagaaran ee shirkadda iyadoo isla markaasna si firfircoon uga caawineysa hagaajinta deegaanka. Adiga oo leh damiir wanaagsan, waxaad u isticmaali kartaa bacda funaanad lagu bacrimiyo ujeedo kasta oo aad ku nafaqeyn kartid isticmaalka ka dib.
Mustaqbalka, waxay noqon doontaa mid sii kordheysa oo muhiim ah in la isticmaalo qalab, oo aan saameyn ku yeelan deegaanka. Labadaba habka wax soo saarka iyo ka dib marka la isticmaalo.
Bacaha funaanadaha bacrimiye ee bacrimiyuhu waxay ku saleysan yihiin qayb weyn oo ka mid ah ilaha dib-u-cusbooneysiinta ee ka yimaada qalabka dhirta ku saleysan. Tan macnaheedu waa wax ka yar CO2 ayaa lagu sii daayaa cimilada, maaddaama ay dhirtu nuugayso CO2 markay korayaan, taas oo ka dhigaysa mid aan saamayn ku yeelanayn deegaanka marka loo eego soo saarista caag saliidda ku saleysan.
Hore: Bacda jiinyeer Oxo-biodegradable
Xiga: Boorsada funaanad Oxo-Biodegradable
Dambiisha Shirtka Compostable